Kitra – “Ligue des champions d’Afrique” : mivonona ny handresy ny Cnaps Sport ny KCCA Ogandey | NewsMada
Kitra – “Ligue des champions d’Afrique” : mivonona ny handresy ny Cnaps Sport ny KCCA Ogandey
Raha tsy misy ny fiovana, ho tonga amin’ity zoma ity eto Madagasikara ny ekipan’ny KCCA Ogandà, hikatroka amin’ny Cnaps Sport, eo fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions”, taranja baolina kitra.
18 ireo mpilalao ao anatin’ny ekipan’ny KCCA Ogandà, hiatrika ny Cnaps Sport, rahampitso asabotsy, eo amin’ny lalao savaranonando mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions”. Fihaonana, hotanterahina eny amin’ny kianja Complexe sportif Vontovorona.
Nambaran’i Mike Mutebi, mpanazatra ny ekipa nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety ny alarobia lasa teo, fa ekipa hifangaroan’ireo mpilalao tanora sy ireo efa manana traikefa no ao amin’ny KCCA hanafika eto amintsika. “Na hilalao any an-tanin’olona aza izahay, tsy hiaro tena velively fa tena hanafika ary hiezaka ny hamono baolina sy haka fandresena, mba hahazoana antoka sy hilaminana amin’ny fiatrehana ny lalao miverina, izay tombony ho an’ny KCCA”, hoy izy.
Nialoha ny niaingany, nanao lalao firahalahiana tamin’ny Police FC izy ireo ka nivoaka ho mpandresy, tamin’ny isa 4 no ho 2, ity ekipa tompondakan’i Ogandà ity. Anisan’ireo nahatafiditra ny baolina roa i Allan Okello, izay vao 18 taona monja ary anisan’ireo zandriny indrindra ao anatin’ny ekipan’ny KCCA sy i Shaban Muhammed ary i Paul Mucureezi.
Na eo aza izany, vonona ny Cnaps Sport hanohitra azy ireo, ary tsy hanaiky ho resy eo amin’ny kianja filalaovany ary tapa-kevitra ny handingana mihitsy ny KCCA. Miantso ny mpijery hanohana azy ireo hatramin’ny farany ny mpilalao malagasy, rahampitso.